मुद्रास्फीति र मुद्रा आपूर्ति को सम्बन्ध मा सुन मा लगानी | अर्थव्यवस्था वित्त
क्लौडी क्यासलहरू | | बोल्सा, मौद्रिक राजनीति
विश्वभरका अधिकांश स्टक सूचकांक पूर्ण वा आंशिक रूपमा पुन: प्राप्ति भएका छन्, केहि भर्खरको रेकर्डहरू सेट गर्दै। हामीलाई तल आउने कारणहरू टीका लगायत देशहरू बीचको सामान्य जीडीपी वृद्धिको पूर्वानुमान हुन्, झट्टै पुन: प्राप्ति, जुन देशहरूबीचको सम्बन्ध सुधार्न सक्छ, र लामो सूचीमा। यद्यपि यो लाभदायक हुन बन्द भयो र सुनको भूतमा लगानी गर्ने समय आयो?
मसँग सुनको बारेमा सब भन्दा लोकप्रिय बुनियादी सिद्धान्तहरू मध्ये एक हो यो मुद्रास्फीति को बिरूद्ध एक राम्रो शरण हो। प्रतिबन्धहरू अवस्थित हुँदा, धेरै लगानीकर्ता र प्रबन्धकहरूले भविष्यको मुद्रास्फीति आउने बारेमा सोरी बनाए र सुनको बृद्धिको लागि आफ्नो स्पष्टीकरण दिए। केहिले उसको पक्ष लिन खोज्दछन्, यद्यपि उसले आफ्नो उच्चबाट १०% बढी गुमाएको छ। के तिनीहरू गलत छन् वा यो घटना हो जुन पुग्न लामो समय लाग्नेछ? जे भए पनि, तपाईंको बाहुलामा एक्सेस राख्नु खराब विचार होइन, र हामीले सुनपत्र तर्फ हामी सबैलाई थाहा छ लगानीकर्ताहरू द्वारा देखेका छौं र कसै-कसैले जो यसमा लगानी गरेनन पनि।
1 सुनमा लगानी, एक सापेक्षता समस्या
2 सुन र मुद्रास्फीति
2.1 मुद्रास्फीति को लागी सुनको मूल्य समायोजित हुँदा के हुन्छ?
2.2 मुद्रास्फीति संग सुन निष्कर्ष
3 मौद्रिक मास तपाईले सुनमा लगानी गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ?
3.1 मौद्रिक आधारको साथ सुनौलो अनुपात
3.2 मौद्रिक आधारको साथ सुनको निष्कर्ष
4 यो सुन मा लगानी गर्न को लागी एक राम्रो विकल्प हो कि मा अन्तिम निष्कर्ष
सुनमा लगानी, एक सापेक्षता समस्या
धेरै चोटि मैले सुनेको छ धेरै व्यक्तिहरूले सुनलाई मुद्रास्फीतिसँग जोडेका छन्। केहि ब्यक्तिहरु को बजार को आफ्नो व्यवहार को दोष। त्यहाँ ती मानिसहरू छन् जसले डिफेन्डको सुनको विपरित व्यवहार गर्दछन्। सारांशमा, यद्यपि यो वास्तवमै त्यस्तो जस्तो छैन, सत्य यो हो कि ती सबै व्यक्तिहरू मैले सुनेका थिए र ती सबै एकै समयमा सही थिएनन्।
मैले व्यक्तिगत तवरले तान्न सक्ने एकमात्र निष्कर्ष यो हो सबै पहिले वर्णन गरिएको परिदृश्यहरू एकै समयमा कन्भर्ज हुन्छ। त्यसैले सुन, अनिश्चितता, संकट, वा मुद्रास्फीति को अवधि संग सामना यसको मूल्य परिवर्तन देख्न को लागी (तर सधैं छैन)। उद्धरण जुन यस धातुमा लगानीकर्ताहरू, संस्था र बैंकहरू द्वारा ब्याजको विषय हुनेछ।
यो गर्नका लागि, हामी मुख्य कारकहरू हेर्न जाँदैछौं जुन तपाईंको मूल्यलाई असर गर्न सक्दछन्।
सुन र मुद्रास्फीति
सुनको चार्ट राख्नु अघि, म संयुक्त राज्यमा मुद्रास्फीतिलाई प्राथमिकता दिन चाहान्छु। हामी देख्न सक्छौं कि हामीसँग केही सान्दर्भिक पक्षहरू छन्। यो अर्को नम्बर दिमागमा राख्नु हो।
गिरावट पहेंलो बक्स २० र s० को दशक। यस अन्तरालको दौरान हामी अवलोकन गर्न सक्छौं कि अस्थिरता कसरी देखा पर्‍यो।
१०% भन्दा बढी मुद्रास्फीति। हरियो बक्सहरू हामीसँग period पीरियडहरू छन्। उच्च शिखरहरूसँग सुरुको अवधि र अन्तहरूको अवधिहरूमा जोड दिँदै।
मुद्रास्फीति%% भन्दा कम हामीसँग तीन ठूलो उपत्यका छन्। तिनीहरू मध्ये पहिलो पहिलो बिन्दु, Deflation को सम्बन्धित छ।
मुद्रास्फीति को लागी सुनको मूल्य समायोजित हुँदा के हुन्छ?
बाट डेटा प्राप्त गरियो macrotrends.net
मुद्रास्फीति को कारण, सबै सम्पत्तीको मूल्यहरु लामो दौडमा माथि जान्छन्। सुन कुनै अपवाद छैन, र यसै कारणका लागि यो ग्राफ मुद्रास्फीति को लागी समायोजित गरिएको छ। त्यो हो, आजको एक औंस सुनको डलरको मूल्य अनुसार विगतमा कस्तो मान हुन्छ। यदि हामी अब सुनको सामान्य चार्टमा हेर्छौं (ओभरसट्युरेट नगरी खुला गरिएको छैन), हामी यसको ठूलो पुनर्मूल्यांकन देख्नेछौं। हामी यसको बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको मूल्यांकन गर्न गइरहेका छौं।
मुद्रा स्फीति। प्रणालीको दिवालियापन हुनु भन्दा पहिले ब्रेटन वुड्समा सहमति भयो, मुद्रास्फीति हुँदा सुनले यसको आन्तरिक मूल्यमा गिरावट देखाउँदछ। यद्यपि अस्थिर विनिमय दरहरूको एक आर्थिक प्रणालीको साथ, मुद्रास्फीति सुनको बढ्दो मूल्यसँग सम्बन्धित छ। यो पनि थप्नु पर्छ कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली भियतनाम युद्धको लागि डलरको ठूलो प्रिन्टि by्गले बिग्रिएको थियो। फ्रान्स र ग्रेट ब्रिटेनको माग अनुसार उनीहरूको डलर सञ्चयलाई सुनमा रूपान्तरण गरियो र जसले अमेरिकी सुनको भण्डार घटायो। सन्दर्भ, जुन सबै कुरा हो, हालको भन्दा फरक थियो।
Deflationary अवधि। यस अवधिमा सुनको मूल्य बढ्यो। यद्यपि लेमन ब्रदर्सको पतनले वित्तीय संकट खडा गरे पछि त्यहाँ छोटो अवधिको अवधिमा गिरावट आयो र सुनको मूल्यमा वृद्धि भयो। यद्यपि यो बृद्धिको कारण औचित्य छ कि यो आर्थिक संकट र बैंकि system प्रणालीप्रति ठूलो अविश्वास द्वारा प्रेरित भएको थियो।
मध्यम मुद्रास्फीति को अवधि। डट-कॉम बबल फट पछि, सुनले राम्रो प्रदर्शन गर्यो, यद्यपि यसले विगतका वर्षहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन। यो कारण सम्भवतः सुरक्षित आश्रय सम्पत्तिको रूपमा सुनको खोजीमा प्रेरित हुन सक्छ।
मुद्रास्फीति संग सुन निष्कर्ष
यदि सुनको मूल्य मुद्रास्फीति माथि प्रतिशत सर्तमा बढ्यो भने, यसमा लगानी गर्नु फाइदाजनक हुन्छ (यो बयान "चिमटीको साथ"!)। जबकि यो सत्य हो कि एक्लै स्वर्गमा लामो समयको लागि राम्रो छ, एक लगानीकर्ताको आकांक्षा समय मा यति टाढा हुन सक्दैन। त्यसकारण, कडा बदलावको अवधिमा सुनको लगानी गर्नु राम्रो विकल्प हो। यदि तपाईं अन्तर्निहित पनि हुनुहुन्छ जब यी परिवर्तनहरू हुन लाग्दछन् र तपाईं अघि लगानी गर्नुहुन्छ भने, फिर्तीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ कि अत्यधिक सन्तोषजनक छ।
निष्कर्ष यो हो कि अत्यधिक मुद्रास्फीति अवधिको सामनामा, सुन एक राम्रो शरण हुन सक्छ। थप रूपमा, विश्व अर्थतन्त्र अवस्थित रहेको सन्दर्भमा यसमा अधिक चासोको पक्ष लिन्छ। अहिले हामी उच्च मुद्रास्फीति परिदृश्यको सामना गरिरहेका छैनौं, तर हामी समस्याको अन्तिम प्रभावहरूको एक अप्रत्याशित आर्थिक अवस्थाको सामना गरिरहेका छौं जुन अवस्थित छ।
सुनको चाँदी अनुपात
मौद्रिक मास तपाईले सुनमा लगानी गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ?
बाट डेटा प्राप्त गरियो fred.stlouisfed.org
म्याक्रो इकॉनोमिक्समा पैसा आपूर्ति, सामानहरू, सेवाहरू वा बचत सेकुरिटीहरू खरीद गर्न उपलब्ध पैसाको पूर्ण रकम हो। यो बैंक (बिल र सिक्का) र बैंक भण्डारमा प्रवेश नगरी जनताको हातमा नगद थपेर प्राप्त गरिएको हो। यी दुई चीजहरूको जोड आर्थिक आधार हो (हामी पछि कुरा गर्नेछौं)। मौद्रिक आधारलाई मौद्रिक गुणकले गुणा गरेको मौद्रिक द्रव्यमान हो।
पहिलो ग्राफमा तपाईले देख्नुहुनेछ कसरी मौद्रिक मास धेरै बढेको छ। जनवरी २०२० मा यो १ 2020..15 ट्रिलियन डलर थियो, अहिले यो संख्या बढेर १3.१ ट्रिलियन डलर पुगेको छ। २० dollars० मा डलरमा मौद्रिक मास 3..8 ट्रिलियनले बढेको छ, जुन २..2020% छ!
मुद्रास्फीतिसँगको सम्बन्धको आधारमा, मौद्रिक नीतिले समृद्धिमा पैसा रकम र अर्थव्यवस्थाको मूल्यहरूको बीचमा एक सम्बन्ध रहेको बताउँछ। अर्कोतर्फ, क्यानेसियन सिद्धान्तले मुद्रास्फीति र पैसाको आपूर्ति बीच कुनै सम्बन्ध छैन, विशेष गरी जब अर्थव्यवस्था बढ्छ भने। त्यसोभए केहि अरू पत्ता लगाउन कोशिस गर्दै, हामी मौद्रिक आधारसँगको सम्बन्धमा एक नजर राखौं।
मौद्रिक आधारको साथ सुनौलो अनुपात
डाटा fred.stlouisfed.org बाट प्राप्त
हामी कसरी देख्न सक्छौं मौद्रिक आधारमा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ। ठुलो हिसाबले "हेलिकोप्टर पैसा" नितीको नतीजा।
जब तपाईं यो ग्राफ हेर्नुहुन्छ तपाईंलाई थाहा छ कि परिवर्तन बिना लामो समयसम्म यसरी जारी राख्न गाह्रो छ। वा हुनसक्छ अझ बढी अनौंठा चीजहरू पनि देखिएका छन्। यस कारणले, यदि मुल्यहरुमा कुनै वृद्धि भएको छैन र मुद्रास्फीति संग सुनको सम्बन्ध संग धेरै पत्ता लगाउन सकेन भने, शायद मौद्रिक आधार संग सम्बन्ध खोज्नु त टाढाको छैन। (यो कुरा मनमा राखेर कि मुद्रास्फीति र मौद्रिक आधार बिचको सम्बन्ध हामी खिच्न सक्दैनौं, किनेले तर्क गरे जस्तै)।
निम्न ग्राफ अधिक प्रकट हुने आशा गरिन्छ। यसले हामीलाई सुन र मौद्रिक आधार बिचको अनुपात देखाउँदछ।
म्याक्रोट्रेन्डसनेटबाट ग्राफ प्राप्त गरियो
धेरै बिन्दुहरू हाइलाइट गर्न सकिन्छ:
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, ठूलो पैसा प्रिन्टिंग को कारण अनुपात कम भयो सन् १ 1960 .० र १ 1970 .० बीचमा (भियतनाम युद्धको कारण, किनकि पहिले छलफल गरिएको थियो)।
मुद्रास्फीतिले निम्न बर्षहरूमा सुनको मूल्य बढायो, तर अनिश्चितता बढाइयो र यसको मूल्य बढ्न मद्दत गर्‍योअनुपातमा धेरै धेरै उच्च चुचुराहरू सम्म पुग्न। (तपाईंले आइपुग्दा 10 को अनुपात प्राप्त गर्न तपाईंले x १० र अधिक हालको सुनको मूल्यलाई गुणा गर्नुपर्नेछ)।
मौद्रिक आधारमा बढेको वित्तीय स since्कट पछि (र नियन्त्रण बाहिर) अनुपात मा कमी पहिले देखेको छैन.
अहिलेको लागि, मौद्रिक आधारमा सुनको उच्च अनुपात बेच्नुहोस्, यो बढी लाभदायक भएको छ। त्यस्तै प्रकारले, सुनमा लगानी कम अनुपात, अधिक भविष्यका लाभहरू यसले दिन्छ।
मौद्रिक आधारको साथ सुनको निष्कर्ष
केवल यदि सुन मौजूदा मौद्रिक आधारसँग मेल गर्न वर्तमान स्तरबाट मूल्या re्कन गरियो भने, माथिल्लो बाटो यो १००% भन्दा बढि हुने थियो। यदि अनुपात १ मा केन्द्रित छ, कि त मुद्रास्फीतिको डरका कारण, कडा स .्कटका साथ अनिश्चित पलहरू आदि। हामी सुनको अवमूल्यन भएको परिदृश्यको अघि आफैलाई भेट्छौं। यो विरोधाभासपूर्ण छ किनकी यसको मूल्य हालै सबै समयको उच्चमा पुगेको छ, तर जे भए मौद्रिक आधार।
यो सुन मा लगानी गर्न को लागी एक राम्रो विकल्प हो कि मा अन्तिम निष्कर्ष
सुनमा लगानी गर्ने सही समय निर्धारण गर्न कुनै एकल मापन मोडेल छैन। यद्यपि हामी कसरी पत्ता लगाउन सक्षम भएका छौं मुद्रास्फीति, मौद्रिक आधार र संकटले असर गर्दछ मा। संक्षेपमा, सम्पूर्ण प्रस context्ग। थप रूपमा, अर्थव्यवस्था व्यवहार छ, र एक राम्रो लगानीकर्ताले अब हामी कहाँ छौं आफैलाई सोध्नु पर्छ। र यो कि यो सबै भन्दा धेरै हुने सम्भावना हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » मुद्रास्फीति र मुद्रा आपूर्तिको सम्बन्धमा सुनको लगानी
तपाईंको मोबाइल रिचार्जमा प्रत्येक महिना बचत गर्न सल्लाहहरू
उत्तराधिकारीहरूको घोषणा: यो के हो, यो कसरी गरिनुपर्दछ, यसको कति खर्च हुन्छ